I-Autopilot Dirk Fassbender Panther P3D
Umbuzo I-Autopilot Dirk Fassbender Panther P3D
iminyaka 2 3 izinyanga ezedlule #737 by Pierre B
Ngasebenza ekuthuthukiseni i-Panther (Copter) yokufanisa nge-Prepar 3D 3.2 (isofthiwe yokulingisa indiza). Ngifake inguqulo yokuqala ye-Dirk Fassbender Autopilot bese ubuyekezwa. Konke kwakungalungile.
Ngikwazi ukushayela zonke izindlela zokuzenzekelayo nge-module ye-Autopilot.
Kepha manje ngifuna ukukhuthaza izindlela ze-Autopilot ngqo ngaphakathi P3D. Angazi ukuthi le module isebenza kanjani.
Lapho sengilande i-HC075DI_FSX_COUGAR_AUTOPILOT.zip ngabona ukuthi ngaphakathi bekunefayela elibizwa nge-afcp.cfg. Ngaphakathi kuleli fayela kukhona ama-codekeys ahlukile ukukhuthaza izindlela ezihlukile ze-Autopilot.
Ngizamile ukuphatha izindlela ze-autopilot ngabacodekeys abakwi-afcp.cfg ngqo ku P3D kepha awukho umphumela.
Umuntu othile unomqondo wokuthi angayenza kanjani?
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #748 by Pierre B
Okubi kwami, ngifuna ukucupha imodi ye-autopilot ehlukene ngamashothikhathi wekhibhodi hhayi ngamakhodi ayisihluthulelo.
Isikhathi ukudala page: 0.287 imizuzwana